तपाईलाई थाहा छ महिलाहरू के चाहन्छन् ? | Rajmarga
तपाईलाई थाहा छ महिलाहरू के चाहन्छन् ?
आम रूपमा पुरुषमा के धारणा पाइन्छ भने जति पटक उनीहरू आफ्नो साथीसित यौन क्रियामा संलग्न हुन्छन्, त्यति नै खुसी उनीहरूकी साथीलाई हुन्छ । जुन केही हदसम्म सत्य हो, तर आजको भागदौडको जीवनमा त्यो सम्भव देखिँदैन । आजभोलि अधिकांश दम्पती कामकाजी हुन्छन् । यस्तोमा यौनसम्पर्क कतिपटक भयो भन्दा पनि कति सन्तुष्टदायक भयो भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ । त्यसैले हरेक दिनको साटो सातामा एकपटक यौनसम्पर्कका लागि उत्कृष्ट समय निकाल्नुपर्ने धारणाको विकास भएको पाइन्छ । जसबाट दम्पतिबीच प्रेम–प्रगाढता त बढ्छ नै, महिलाहरूलाई सन्तुष्टि पनि प्राप्त हुन्छ ।
यदि तपार्इं आफ्नो जीवनसाथीको नजिक रहन चाहनुहुन्छ भने उनको इसारा बुझ्नु आवश्यक छ । महिनाबारीका बेला हार्मोनल परिवर्तनका कारण महिलाहरूमा स्वभावमा समस्या देखिन्छ, अर्थात् उनीहरूको स्वभाव परिवर्तन हुन्छ । यसबाट केही महिलामा कामेच्छा बढ्छ, तर केही यौनसम्पर्कबाट टाढा रहन मन पराउँछन् । यस्तोमा उनीहरूको मनको कुरा बुझेर व्यवहार गर्नु पुरुषको जिम्मेवारी हो ।
Previous post: महिलाले राति ब्रा लगाएर सुत्ने की नलगाई ? यस्तो छ वास्तविकता
Next post: ओली संसदीय दलको नेता चयन